Pro Evolution Soccer 2012 Final ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Game » Pro Evolution Soccer 2012 Final
By နေမင်းမောင်5:50 AM15 comments
ဘောလုံးဝါသနာအိုး တွေအတွက်အသစ် ထပ်ထွက်လာတဲ့ Update လေးတင် ပေးလိုက်ပါတယ်.. ဖိုင်ဆိုဒ် ကတော့ တော်တော်များပါတယ်..6GB လောက်ရှိပါတယ်.. ကျွန်တော် ဒေါင်းလော့ချရတာ အဆင်ပြေအောင် Mdeiafire Link ရှာပြီးတော့ တင်ပေးထားပါတယ်.. တစ်ပိုင်းကို MB 200 စီနဲ့ အားလုံးပေါင်း အပိုင်း 33 ပိုင်းရှိပါတယ် ကော်နက်ရှင် ကောင်းရင်တော့ အောက်မှာသာ ဒေါင်းလော့ချ သွားလိုက်ပါ...
- OS - Windows XP, Vista or Seven
- Processor - 3.2 GHz or faster
- Memory - 1.0 GB RAM
- Video Card -256 MB
- Hard Drive - 8 GB
- Keyboard/mouse or Microsoft Xbox 360 Controller for Windows
- Burn or mount Iso File
- Copy crack on DVD to gamedir
ဒီကောင်လေးကို ဒေါင်းလော့ချပြီးလို့ ဖိုင်ပြေတဲ့အချိန်မာ Password တောင်းပါလိမ့်မယ် အောက်က Password ပေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ..
ကျေးဇူးဘဲအကိုရေ...ဒေါင်းသွားတယ်ဗျ...လိုချင်တာ လိုက်ဒေါင်းနေတာ တခုမှ အဆင်မပြေဘူး....
Anonymous September 28, 2011 at 6:19 PM
အကိုရေ...file ၁၀ ..၂၀..၃၀ က ပတ်စဝေါ့
နေမင်းမောင် September 28, 2011 at 6:21 PM
ကျွန်တော်အောက်မှာ Password ထည့်ပေးထားပါတယ်အကို.. andystonecold ပါ
Anonymous October 1, 2011 at 1:23 AM
အကိုရေ ဒေါင်းလိုက်တာ လိုင်းမကောင်းလို့ ပြန်ပြုတ်ကျသွားတာ ဒေါင်းလော့မန်နေဂျာက support ပြန်လုပ်မပေးတော့ဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်မသိတော့ဘူးဗျာ အရမ်းကြိုက်တဲ့ ဂိမ်းလေးမို့ပါ ကူညီပါအုံး
နေမင်းမောင် October 1, 2011 at 6:56 AM
ဟုတ်ကဲ့အကို .. အကိုဒေါင်းနေရင်းနဲ့ Fail ဖြစ်သွား
တဲ့ File ကို IDM ထဲကနေအရင် Remove လုပ်
လိုက်ပါအကို .. ပြီးမှပြန်ဒေါင်းလော့ချလိုက်ပါအကို..
chan myat oo October 1, 2011 at 4:19 PM
အကို တစ်ချို့ဖိုင်တွေက dl လုပ်လို့မရဘူး
IDM နဲ့ dl တာ ဖိုင် 01 နဲ့ 09 က IDM ထဲမှာ download info တက်လာပြီး ဖိုင်ပါမလာဘူး။ ကျွန်တော့် connection ကကောင်းပါတယ်။ connection ကြောင့်လို့တော့မထင်ဘူး။
Anonymous October 3, 2011 at 6:44 PM
အကိုရေ ကျွန်တော်ခု ဖိုင်တွေကို ဖိုင်တစ်ဖိုင်ထဲအကုန်ထည့်ထားတယ် ပြီးရင်ဖိုင်တွေကို ဒီအတိုင်းဖြေရမှာလား ပြန်ဆက်ရအုံးမှာလား ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ ကူညီပါအုံး
aungaung October 7, 2011 at 11:41 AM
အားလုံး download လုပ်ပြီး install လုပ်ပြီးပြီ နေမင်းရေ ... ဒါပေမဲ့ဖွင့်တဲ့ အခါ အဆင်မပြေဘူး ကွ။
အကို စက် က Fujitsu lifebook LH531 ပါ memory က 3GB ပါ....
ဒါပေမဲ့ဆော့ လို့ မရဘူး ....
အကို စက် က ဂိမ်း ကြီးကြီး တွေ ဆော့လို့ မရ ဘူး ထင်တယ် ....
ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ... ကူညီ ပါအုံး ...
ကျေးဇူး ပဲ နေမင်း ရေ ...
နေမင်းမောင် October 7, 2011 at 9:17 PM
ဒီဂိမ်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ sysrtem ကိုအောက်မှာပေးထားပါတယ်အကို ..
ကျော်ကျော် December 12, 2011 at 12:12 AM
အကိုရေ....folder not found တဲ့ဗျာ... ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ကူပါဦး....ကျေးဇူးပါဗျာ...
Anonymous December 29, 2011 at 9:01 PM
အဟီးးး ကျွန်တော့်စက်လဲမနိုင်ဘူး ဆော့ချင်ရင်တော့
pes 2009,2010 သာဆော့ဗျ
11,12 က game driver ရှိမှအဆင်ပြေမှာ
mrwinkyawaung4 April 30, 2012 at 11:39 AM
အဲဒီဂိမ်းမျိုးဟာ ဗီဒီယိုမာန်မိုရီ ၁ ဂစ် တိုင်းမရဘူး နောက်တစ်မျိုး မာန်မိုရီး ဘတ် ကိုကြည်ပြီးမှ ဂိမ်းကဒ်ဝယ် ၆၄ ဘစ်ဆိုထစ်နေမယ် အနည်းဆုံး ၁၂၈ ဘစ် မဟုတ်ရင် အဲဒါထက်များမှ ကစားလိုကောင်းမယ် ဗီဒီယိုမာန်မိုရီ ၅၁၂ နဲ မာန်မိုရီဘတ် ၁၂၈ ဆိုရင်လည်း ကစားလိုရ တယ် Memory Size :
64-bitMemory Size :................................................................
.net famework 4.04 မရှိဘူးလို့ပြနေတယ်